China Metal prototype mpanamboatra sy mpamatsy | Mestech
Antsoy izahay: 13530756565
Lasitra tsindrona plastika
Fanamboarana tsindrona indroa
Dingana fanariana maty
Sady fanariana maty
Volavola sy fivoriambe
Famolavolana trano elektronika
Famolavolana ny fitaovana ao an-trano
Famolavolana vokatra plastika
Famolavolana ampahany vy
Torohevitra momba ny famolavolana sy ny famolavolana ny plastika
Ahoana ny fomba famolavolana faritra plastika
Volavola sy Prototypes
Lasitra fanariana maty
Fiara plastika amin'ny fiara
Boaty plastika fonenana plastika ho an'ny herinaratra
Fitaovana plastika an-trano
Ahoana ny fomba hanaovana dashboard auto
Boaty fihaingoana elektrika sy bobongolo
Famolavolana tsindrona resina ABS
Ny prototype vita amin'ny metaly dia natao foana mba hamerenan'ny injeniera ny famolavolana fitaovana na masinina. Mestech dia manome famokarana prototype vy an'ny mpanjifa.
Prototype vynatao foana ho an'ny injeniera hanamarina ny famolavolana ny fitaovana na ny milina. Mestech dia manome famokarana prototype vy an'ny mpanjifa.
Matetika ny faritra metaly dia ampiasaina hanamboarana akorandriaka sy akorandriaka, ary lafo kokoa noho ny an'ny plastika. Mba hanatsarana ny famolavolana sy hampihenana ny risika dia ilaina ny manao santionany prototype ho an'ny famolavolana sy ny fanamarinana ny dingana alohan'ny famokarana ofisialy.
Ny faritra metaly dia be mpampiasa amin'ny milina sy fitaovana isan-karazany. Matetika izy ireo dia ampiasaina hanamboarana faritra marina noho ny fahamarinan-toetrany, ny tanjaka sy ny hamafiny, ny toetran'ny mari-pana ambony sy ambany ary ny fitondra herinaratra, izay ambony lavitra noho ny faritra plastika.
Raha ampitahaina amin'ny faritra plastika dia misy karazana fitaovana maro ho an'ny faritra vy, toy ny firaka aliminioma, firaka varahina, firaka zinc, vy, firaka titanium, firaka magnesioma sns, miaraka amin'ny fananana samihafa. Anisan'izany ny ferroalloys, ny alimo aluminium, ny alimo varahina ary ny metaly zinc dia matetika ampiasaina amin'ny vokatra indostrialy sy sivily. Ireo fitaovana metaly ireo dia manana toetra ara-batana sy simika samihafa, ary ny teknolojia fanodinana ireo faritra vy misy rafitra sy endrika samihafa dia samy hafa be.
Araka ny fitaovana sy ny firafitry ny ampahany, misy karazany maro ny famokarana betsaka mamorona dingana ho an'ny faritra vy, toy ny fanapahana, maty fanariana, fanakonana, calendering, miondrika, extrusion ary sinter. Ho an'ny famoahana maty, ny banga, ny extrusion ary ny sinter dia ampiasaina ny bobongolo. Ny bobongolo mazàna dia midika fampiasam-bola be, koa matetika ny fanapahana mekanika no anaovana ny prototype.
Misy dingana telo lehibe hanaovana ohatra prototypa vy:
Ampiasaina indrindra ho an'ny faritra misy ny refy avo lenta sy ny ampahany kely.
Ny fitaovana lehibe indrindra dia ny milina fikosoham-bolo, ny lathe, ny grinder, ny EDM, ny WEDM ary ny fitaovana milina hafa.
Ho an'ny fanodinana ny fiaramanidina, ny etona, ny lakan-drano ary ny lavaky ny famaky, ny tanany, ny kapila, ny cuboid ary ny faritra metaly miolaka.
Fitaovana milina manokana no ampiasaina hanodinana ireo faritra misy takiana avo lenta. Fizarana toy ny paingotra, tsorakazo sns.
2. Fanodinana vy
Ho an'ny akorandriaka sy rakotra santionany amin'ny rindrina manify sy ny hateviny mitovy hatraiza hatraiza, ny metaly fanodinana metaly dia matetika ampiasaina, izany hoe amin'ny alàlan'ny milina fanapahana laser ary fitaovana na fitaovana tsotra amin'ny alàlan'ny fanondrahana, fanapahana, fametahana ary fametahana. Miankina amin'ny famokarana tanana izany.
Ohatra, trano fonenana, chassis solosaina, sns.
3. Fitsaboana taorian'ny fitsaboana
Aorian'ny fanodinana na fanodinana vy, dia azo ny refy sy ny endrika famolavolana. Mba hahazoana kalitao sy fisehoana ivelany tsara dia ilaina matetika ny fitsaboana amin'ny tany.
A. Famitana farany: fitotoana volo, famolahana, fanoratana, sary sokitra amin'ny laser ary fametahana embossing.
B. Famafazana vovoka, fanodinana herinaratra, fanosorana sy fandokoana.
Prototypes momba ny machining aluminium
Prototype vy milina marindrano
Prototypes vy tsy misy vy
Ny hamafin'ny haavo, ny mari-pana miempo avo lenta ary ny fepetra takiana amin'ny akora avo lenta dia mamaritra ny teknolojia fikirakirany tsy mitovy amin'ny an'ny fitaovana tsy metaly (toy ny plastika) amin'ny fanaovana prototypes na santionany. Ny orinasanay dia manome ny mpanjifa karazana prototypa tokana na fanamboarana mockup ary serivisy, ao anatin'izany ny faritra plastika, silica gel gel, faritra metaly sns. Raha mila izany ianao dia mifandraisa aminay.
Previous: Ampidiro koronosy
Manaraka: Lasitra plastika ho an'ny milina fanesorana volo laser
Prototype fanontana vita amin'ny vy 3D
Prototype milina metaly
Prototype ampahany amin'ny nohitsakitsahana vy
Prototype Sheet Metal Piera
Fanontana 3D vy